येशूले बचत तपाईं गरौं « Revamp Your Mind
जन्म फेरि मुक्ति सन्देश
यूहन्ना 3: 1-7
निकोदेमसलाई, यहूदीहरूको शासक नाउँ फरिसीहरूले, एक मानिस त्यहाँ थियो:
सोही रात द्वारा येशूले आए, र उहाँलाई निम्ति, रब्बी, हामी तपाईंले परमेश्वरको देखि आएको एक शिक्षक हुनुहुन्छ भनेर थाह भन्नुभयो: कुनै मानिसले तपाईंले परमेश्वरको बाहेक उहाँसित हुन doest कि यी चमत्कारहरू गर्न सक्नुहुन्छ लागि।
येशूले जवाफ दिनुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, Verily, verily, म एक मानिस फेरि जन्मन छोडेर, उहाँले परमेश्वरको राज्यको देख्न सक्दैनन्, तिमीलाई भन्न।
निकोदेमसलाई उहाँले पुरानो छ जब मानिस जन्मन कसरी, उहाँलाई निम्ति भन्नुभयो? उहाँले आफ्नो आमाको गर्भमा मा दोस्रो पटक प्रवेश गर्न सक्छन्, र जन्मन?
येशूले Verily, verily, म एक मानिस पानी जन्मन र आत्माको, उहाँले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन छोडेर, तिमीलाई भन्न, जवाफ दिए।
शरीरको जन्म हुन्छ जो कि शरीर छ; र आत्माको जन्म हुन्छ जो कि आत्मा छ।
Marvel म तिमीलाई, तिमीहरूले फेरि जन्मन हुनुपर्छ छैन भनेर।
– हामी विश्वास tonques बोल्न को बाइबल प्रमाण संग पवित्र आत्मा प्राप्त मा, र यो हामीलाई प्रार्थना गर्न मदत गर्छ भनेर।
अनि यी चिन्हहरू विश्वास तिनीहरूलाई पालन गर्नेछन्; मेरो नाम मा उनि डेविल्स फ्याँकिएको हुनेछ; तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू कुरा हुनेछ;
प्रेरित2v 1-4
पेन्तिकोसको दिन पूर्णतया आउन थियो र, तिनीहरू एक ठाउँमा एक अनुसार सबै थिए।
अनि अचानक त्यहाँ एक भागन शक्तिशाली हावा को रूपमा स्वर्गबाट ​​एउटा आवाज आयो, र यो तिनीहरूले बसिरहेका थिए जहाँ सबै घर भरिएको।
अनि त्यहाँ तिनीहरूलाई जस्तै आगोको रूपमा cloven भाषाहरू देखा, र यो तिनीहरूलाई प्रत्येक मा बसे।
अनि तिनीहरू सबै पवित्र भूत भरिएको, र आत्मा तिनीहरूलाई बोलीको दिनुभयो रूपमा, अन्य भाषाहरू संग बोल्न थाले थिए।
रोमी 8 v 26
हामी हामी पर्छ रूपमा लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ छैन के थाहा लागि: यसैगरी आत्मा पनि हाम्रो रोगबिमारीले helpeth तर आत्मा नै uttered सकिँदैन जो groanings (tonques बोल्न) संग हाम्रो लागि intercession maketh।
हामी विश्वास येशू ख्रीष्टमा व्यक्तिगत विश्वास द्वारा ईश्वरीय निको मा। मर्कूस 16 v 18।
“तिनीहरूले बिरामी मा हात राख्नु पर्छ, र तिनीहरूले रिकभर हुनेछ”।
यहाँ यो एक पुराना मित्र श्री पावलले Rocchi द्वारा, पश्चात्ताप र आफ्नो नयाँ यरूशलेम एल्बम देखि Baptised हुनुहोस्, एक गीत मा छ। यो म सबै सदाको लागि मुक्ति प्राप्त गर्न कसरी सुनेका सबै भन्दा राम्रो गीत छ।
तपाईं मित्र एक ध्वनि फाइल मा यस मुक्ति संदेश इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक
अब यो काम। कसरी इमेल मानिसहरूलाई मुक्ति गर्न। समय को लागि के खेति धेरै र यस मजदूर केही छोटो छ।
ईमेल3तपाईंले मानिसहरूलाई अब थाहा!
2 तिमोथी 4:2– हरेक ठाउँमा, सबै कहिलेकाहीं वचन प्रचार हुनुहोस्।त्यो इन्टरनेट सामेल छन्। आफ्नो शत्रुहरू साथै तिनीहरूलाई यसलाई पठाउन आफ्नो मित्र र प्रेम गर्न फेरि सन्देश जन्म इमेल।
उहाँको नयाँ यरूशलेम एल्बम देखि पावलले Rocchi द्वारा अर्को ठूलो गीत।
समय आफ्नो सकिँदै छोटो छ र Undefended पूर्व स्वर्गको कुंवारी कन्या र नारी वा अरबी यस साइन धेरै चाँडै साँचो आउँछ र Lords गर्न त यसको धेरै नजिक साँच्चै फर्कन।